वडालाई बजेट वितरण सन्तुलित ढंगबाट – जागरण अनलाइन
वडालाई बजेट वितरण सन्तुलित ढंगबाट
२०७६ असार १८, बुधबार २०:४५ मा प्रकाशित
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकार स्वतन्त्र सरकारका रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। उनीहरुले आफै नीति नियम, कानुन निर्माण गर्दै कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही चुनौती पनि स्थानीय सरकारमा देखिने गरेको छ।
स्थानीयमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो योजना अनुसार गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकलाई नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे आभारभूत सिद्धान्तको आधारमा नगरको विकास र बजेटलाई व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन्। यसैविषयमा नगरप्रमुखसँग दाङ गोपाल शर्माले गरेको कुराकानी :
अहिलेको बजेटको नयाँ विशेषता के हो ?
स्थानीय सरकारले आफ्ना गतिविधि र योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याउनुपर्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि सरकारकै निर्देशन अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको छ। आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा नगरको बजेट आएको छ। दीर्घकालिन रणनीतिक गुरुयोजना अनुसार नगरको बजेट ल्याएका छौं। यसले संघ– प्रदेश–स्थानीय सरकारलाई जोडेको छ। यस वर्षको बजेट र विकास योजनाले पहिलो प्राथमिकता सडक यातायात राखिएको छ।
सडक वर्षको रुपमा घोषण गरेका छौं। उपमहानगरका १९ वटै वडामा तीन किलो मिटर कालोपत्रे सडक बनाउने यो वर्षको लक्ष्य छ। त्यसै गरेर स्र्माट सीटी कार्य योजना अघि बढेको छ। स्मार्ट छोरी विहेवारी २० वर्ष पारी जस्ता आधार लिएर योजना निर्माण गरिएको छ। समावेशिताको आधारमा बजेट निर्माण भएको छ। विकासको प्राथामिकता दिएर तुलसीपुर विकास बोर्डको समेत गठनको तयारी गरिएको छ।
हालसम्मको उपलब्धी के ?
उपलब्धिको हिसाबले हामीले सिस्टम, नीति, व्यवस्थाको आधार सिर्जना गरेका छौं। सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको तुलसीपुरलाई देशकै नमुना तुलसीपुर सहरको रुपमा विकसित गर्ने एउटा बलियो आधार तयार पारेका छौं। त्यो ठुलो उपलब्धि हो। ५ वर्षे कार्यकालमा तुलसीपुरलाई देशकै चिनिने सहरको रुपमा हामीले विकास अवश्य गर्ने छांै। त्यसको खाका पनि तयार भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक तुल्सीपुर स्पोर्टस सिटी घोषणा भएको छ। त्यो तुलसीपुरको लागि गौरबपूर्ण उपलब्धी हो।
हामीले थालेका केही सकारात्मक कामको आज देशभर सिकाइ हुँदैछ। खरको छानो हटाउने कुरा, सुत्केरीलाई भत्ता बढाउने लगायत विषय तुलसीपुरले पहिले ल्याएको थियो। अहिले उदाहरणीय कामको देशभर सिकाई हुनु हामी सबैको उपलब्धि हो। विकास बोर्डको अबधारण पनि तुल्सीपुुरले नै सार्वजनिक गरेको छ।
उपमहानगरलाई सम्बृद्ध बनाउने योजना के छ ?
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नमुना नगरको रुपमा विकास गर्दै समृद्ध नगर बनाउने मेरो योजना हो। त्यसका लागि केही सपना र योजना तय गरेको छु। जुन कुरा म आफुले भन्दै पनि आएको छु। स्मार्ट सिटी, स्र्पोटस सिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमताको नगरी बनाउने योजना छ। त्यही अनुसार योजना अघि बढेका छन्। स्र्माट सिटी त्यसै यो कुरा भनिएको होइन। उपमहानगरपालिका एक्लैले मात्र गर्ने कुरा होईन यसमा आमनागरिक यहाँका सरोकारवाला निकाय र विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य सहयोगी निकायको साझा सहयोग र साथ आवश्यक रहन्छ। तुलसीपुरको मात्रै नभएर समग्र दाङकै विकास गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ आएका हौं जुनकुरा जनताले समेत विश्वास गरेर प्रतिनिधिको रुपमा पठाएका छन्।
तुलसीपुरमा के के सम्भावना छ ?
सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने अन्य क्षेत्र भन्दा तुलसीपुरमा धेरै रहेका छन्। तुलसीपुरलाई सम्भाव नै सम्भावनाको सहर मान्न सकिन्छ। त्यति मात्रै हो त्यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा, यहाँ विकास गर्न निकै सहज छ। हामीसँग एउटा विकसित सहर बन्न सक्ने थुप्रैं आधार तुलसीपुरमा खडा भएका छन्। जुनकुरालाई थप विकास गर्दै लान जरुरी भएको म आफुले देखेको छु। केही कुराहरु व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।
उपमहानगरपालिका भित्र रहेका विविध कुराहरु हाम्रा सम्पति हुन। जसलाई चिनाउन र केही भए पनि विकास गर्न सक्यो भने हाम्रो लागि ठूलो सम्भावना रहेको छ। तुलसीपुरमा रहेको विमानस्थललाई आन्तरिक उडानका रुपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने पनि त्यसले ठूलो टेवा पुग्नेछ।
यहाँ गुर्नपर्ने धेरै कुरा बाँकी छ। हामीले योजना बनाएर अघि बढेका छौं। तुलसीपुर मात्र होइन् समग्र दाङको पहिचान र भविष्य कोर्ने यो एउटा थलो हो। विकसित तुलसीपुरको लागि एउटा रेखाङ्कन कोर्नु छ। जुन रेखाङकन आउँदो २०औं वर्ष सम्ममा पनि सार्थक बनिरहोस्। अहिले नै रेखाङ्कनले मूर्तरुप लिन नसके पनि एउटा बलियो आधार बनाउ सकिन्छ। त्यसका लागि अहिले जति गरेको मेहनत योजना र कामले मात्र पुग्दैन् अझ थुप्रो काम गर्न आवश्यक देख्छु।
तुलसीपुरमा गुणस्तर तथा पूर्वाधार र नीतिगत रुपमा शिक्षाको बिकास गर्ने कुरा अघि सारेका छौं। यति मात्रै हैन ठूलो लगानी भित्राउन निजी क्षेत्रलाई पहल गरिरहेका छौं। होटेल पर्यटनमा लगानी बढोस भनेर। यहाँ भएका सडकको अबस्था सुधार गर्न र सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने सडक गुरुयोजना समेत अघि बढाइएको छ।
जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्न पाउँदा कस्तो अनुभूति भएको छ ?
जनप्र्रतिनिधिको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो दोस्रो पटक हो। तुलसीपुर नगरपालिकाको ५४ सालको निर्वाचनमा उप–प्रमुखको रुपमा ५ वर्ष काम गरेको थिए। अहिले प्रमुखको रुपमा छु। विगतको र अहिलेको जनतासँगको अनुभूति साटदा धेरै नै फरक रहेको छ। अहिले मैले चार वटा विषयमा ब्याख्या गर्दा। जनता चनाखा भइसकेका छन्। जनताको चेतनास्तर बढि भएको छ। जसका कारण जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न धेरै सहज भएको छ। अर्काे कुरा जनताका मागहरु धेरै हुँदा पुरा गर्न कठिनाई भइरहेको छ। चेतनास्तर बृद्धि भएका कारण जटिल परिस्थिति आएको छैन। कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन पर्याप्त हँुदा सहजता बढि भएको छ। जनतासँग प्रतयक्ष रहदा सिस्टम अनुसारको काम गर्न खोज्दा केही चुनौति र समस्या पनि देखिने गरेका छन्।
सुरुमा हामीले प्राकृतिक विपद्सँग सामना गर्नुपर्‍यो। असारमा निर्वाचित भएर आउँदा साउनमा आएको बाढी हाम्रो लागि चुनौति हुन पुग्यो। राज्यको विभिन्न ऐन नियमका कारण पुनःस्थापनामा अहिले पनि समस्या रहेको छ। आधार सिर्जना गर्ने कार्यकाल भएकाले जनताको अपेक्षा अनुसार अझै जान सकिएको छैन।
व्यवसायीको पेशागत हकहित नै हाम्रो प्राथमिकताः दाङ चेम्वरका अध्यक्ष श्रीधर महरा २०७६ असार १८, बुधबार २०:४५
दाङलाई राप्रपामय बनाउने हामिहरुको दृढ संकल्प छ–कार्यवाहक अध्यक्ष भुपाल रावत २०७६ असार १८, बुधबार २०:४५
सडक विस्तार नै पहिलो प्राथमिकताः वडाध्यक्ष बुढा २०७६ असार १८, बुधबार २०:४५